Oxandrolone (Anavar) powder (53-39-4) hplc = 99% | AASraw
/ Products / Anabolics Steroids / Testosterone powder Series / Oxandrolone (Anavar) powder
4.20 kupererwa ne 5 maererano ne 5 kasitoma ratings
MUTSVENE unobatanidza uye unogadzira zvigadzirwa kubva ku gramu kusvika pakukura kweOxandrolone (Anavar) powder (53-39-4), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Oxandrolone / Anavar ndomumwe wevanhu vanozivikanwa kwazvo vanabolic steroids. Iyo inovandudza simba rako nesimba. Uye iyi ndeimwe yevana anabolic steroids inogona kushandiswa nevarume nevakadzi vakachengeteka. Icho chikamu chaicho chinoshamwaridzana zvikuru. Oxandrolone / Anavar isina mubvunzo iyo inobatsira zvikuru vanabolic steroid.
Oxandrolone (Anavar) video yeupfu
Oxandrolone (Anavar) powder zvinhu Characters
Oxandrolone (Anavar) kushandiswa kwehupfu muSteroids
Oxandrolone powder inonyatsoziva sechiratidzo zita rinonzi Anavar powder.
Oxandrolone Use powder
5-10mg pazuva zuva rinotarisana ne20mg zuva nezuva kazhinji kuve muwandu wepamusoro. Kushandisa kwakadaro kunowanzoguma 2-4weeks nechinguva chiduku mushure mekushandiswa usati waita yeiyo 2-4 vhiki yevhiki.
Nokuda kwevarume vanomhanya vari kutambira mutambo, 1 20-30mg pazuva reta dosing ichapa mutambo kukurudzira, asi vazhinji vachawana 40-50mg pazuva kuti ive yakanyanyisa. 80mg zuva nezuva hazviwanzozivi, asi izvi zvichawedzera ngozi yemigumisiro.
Yambiro pana Anavar powder
Chikamu effecta zvechokwadi chinogoneka, asi kumunhu mukuru akwegura vanogona kuderedzwa. Kusiyana nedzimwe dihydrotestosterone yakakurumbira yakagadzirwa nevanabolic steroid muAnadrol, Anavar ndizvo zvatinodaidza kuti panzvimbo yechirwere inobatsira anabolic steroid.
Oxandrolone powder inotora nzvimbo dzinotungamirira kubva pakutanga kwekuvapo kwayo. Chigadzirwa chikuru chaAnavar powder chinonzi Oxandrolone powder. Kubatsira kwayo kukuru ndiko kukwanisa kuisa carbon atom ne oksijeni. Izvozvo zvinoshamisa pamitambo yekuita maitiro zvinosvika pamusana pediki uyerogenic index uye yakawedzera anabolic zvigadziro.
Raw Oxandrolone (Anavar) powder
Nzira yekutenga Oxandrolone powder: Anavar powder kubva kuAASraw